नेपालकै समुहमा रहेको स्कटल्याण्डको दोस्रो जित , नेपाललाई कति खतरा ?  Hamrosandesh.com
नेपालकै समुहमा रहेको स्कटल्याण्डको दोस्रो जित , नेपाललाई कति खतरा ?
बलरहरुले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि स्कटल्याण्डले आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनोटमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। समूह बी मा रहेको स्कटल्याण्डले हङकङलाई मंगलवार ४ विकेटले पराजित गर्दै लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको हो। यसअघि आइतबार भएको पहिलो खेलमा स्कटल्यान्डले अफगानिस्तानलाई ७ विकेटले हराएको थियो।
बुलावायोमा टस जितेर स्कटल्याण्डले हङकङलाई पहिले ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। त्यसलाई बलरहरुले सही सावित गर्दा हङकङ ९१ रनमा अलआउट भयो।
हङकङका लागि ओपनर निजाकत खानले सर्वाधिक २६ रन जोड्दा अन्य ब्याट्सम्यान सस्तैमा आउट भए। हङकङको इनिङ ध्वस्त पार्न स्कटल्यान्डका टम सोलले ४ विकेट लिए। यस्तै अलास्डयर इभान्सले ३ विकेट तथा मार्क वाटले २ विकेट लिए।
हङकङले दिएको ९२ रनको झिनो लक्ष्य स्कटल्यान्डले ६ विकेटको क्षतिमा २३.३ ओभरमा पार गर्‍यो। स्कटल्यान्डका लागि केल कोइटजरले सर्वाधिक ४१ रन जोडे। अन्य ब्याट्सम्यान सस्तैमा आउट भएका थिए। बलिङतर्फ हङकङका इसान खानले ३ र इसान नवाजले २ विकेट लिए।
बलिङमा हङकङका एहसान खानले ३ तथा एहसान नवाजले २ विकेट लिए। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट सुरुवात गरेको स्टकल्यान्डसँग नेपालले बिहीबार प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यसअघि नेपाल आइतबार भएको पहिलो खेलमा घरेलु टिम जिम्बावेसँग पराजित भएको थियो।